Ikhaya elimangalisayo eCestica elineJacuzzi kanye namagumbi okulala ayi-1
U-Novasol unokuphawula okungu-46 kwezinye izindawo.
Phansi kwegquma nasethunzini lehlathi, kukhona le ndlu yamaholide yasemaphandleni. Ifakwe ngesitayela sakudala futhi inikeza izivakashi zayo iholide eliphumuzayo endaweni ethule. Ihlathi elihle nemvelo eningi ihlobisa i-idyll yendlu. Ngezansi kwendawo kugeleza umfudlana, eduze kwawo kukhona inkundla kanye nesigayo esidala esiqhingini, okuyisibonelo esigciniwe somlando. Indlu inekhishi-igumbi lokuhlala elinehhavini yesinkwa sasekhaya, igumbi lokulala, igumbi lokugezela kanye nezindlu zangasese ezimbili. Ngaphandle kwendlu kunobhavu oshisayo wokuzilibazisa. Kulesi sakhiwo kukhona nendlu elungiswe kabusha kusukela ezinsukwini ezedlule, namuhla esebenza njengemnyuziyamu encane ebonisa imibukiso yezimpahla zesintu, izitsha, izincwadi, nezinto zakudala, umnikazi aziqoqa ngokucophelela futhi azigcine ukuze avikele amagugu amasiko asendaweni. Kule ndawo kukhona nezindlu ezintathu ze-glamping ezincane eziklanyelwe ukuzijabulisa nokudlala kwabancane.Ngokuvumelana nomnikazi, kungenzeka ukulungiselela nokuletha izibiliboco zendawo ze-gastronomic ezivela ekulinyweni kwemvelo kanye nokudla kwendabuko kwalesi sifunda. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, sincoma ukuthi uvakashele idolobha elihle lase-Varaždin, elizokujabulisa ngefa lalo eliyisikhumbuzo kanye nobuciko kanye nokulondolozwa kwezakhiwo ezinhle zeBaroque, izikwele ezivumelanayo kanye nemigwaqo yothando. Ungaphuthelwa ukuvakashela i-Museum of Angels kanye ne-Entomological Collection of the Insect World futhi esigcawini esikhulu sase-Varaždin ungazwa ukukhanga kweqiniso kwempilo yabasingathi. Eduze kunezindawo zokugeza ezishisayo lapho ungajabulela khona izinzuzo zamanzi ashisayo kanye nesevisi yezempilo.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 300 m / ithuba lokudoba 3 km / ukuthenga 500 m / Amanye amanzi noma indawo yokubhukuda.(Umfula) 1 km / indawo yokudlela 600 m / idolobha eliseduze(Varazdin) 23 km / amanzi(Ichibi) 4 km